फूलको आँखामा फूलै संसार’ यो चर्चित गीतकी गायिका आनी छोइङ गायिका, लेखक मात्र होइन विद्यालय संचालक पनि हुन् । उनले आनीहरुकै लागि अध्ययन गर्ने विद्यालय संञ्चालन गरेकी छिन् । जसको नाम हो, आर्यतारा । प्रस्तुत छ, यी विविध विषयमा महिला न्यूजका लागि रुमु न्यौपानेले आनी छोइङ डोल्मासँग गरेको कुराकानी :
आर्यतारा विद्यालयमा कति जना आनीहरुले पढ्छन् ?
— अहिले ३ सय जना छन् तर मैले पढाएका मध्ये कोही अहिले स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरिरहेका छन् भने कोही आफ्नो घरगृहस्थी जीवन बिताईरहेका छन् । सन् २००० देखि उनीहरुले शिक्षा लिएका थिए ।
आफूले शिक्षा दिएका विद्यार्थीमाथि कस्तो आशा हुँदो रहेछन् ?
— मेरो सोच भनेको मेरो विद्यार्थीहरुको जीवन सार्थक होस् । कसैको कुभलो नचिताई अघि बढून् भन्ने चाहन्छु म । उनीहरु जीवनमा जति व्यस्त भए पनि धर्ममा चाहिं लागिरहून् भन्ने छ । कतिपय अवस्थामा घर गृहस्थीमा लागिसकेपछि धर्मकर्ममा मन नजान पनि सक्छ । घर गृहस्थीमा लागेका महिलाहरु घरमा सबैको सेवा गर्दै, अनेक बाधाहरु झेल्दै आँशु झार्दै जीवन बिताउनेहरु पनि हुन्छन् । यी सबै बाधाहरुको कारणले उनीहरुको धर्मप्रतिको आस्था नछुटोस् भन्ने कामना छ ।
— तपार्इं आफू त यस्ता व्यवहारिक कुराबाट टाढै हुनुहुन्छ नि ?
मेरो आमाको जीवन देखेको छु मैले । आमाकै जीवनशैली र दुख देखेर विवाह गर्दिन भन्ने निर्णय गरेर आनी बनें । मेरो आमाले त दुख पाउनु भयो तर म दुख खोज्दिन भन्ने सोच आएर हो । तर घर व्यवहार कस्तो हुन्छ थाहा छ ।
आनी त धेरै जना बन्छन् तर तपाईं चाहिं कसरी चर्चित बन्नुभयो ?
— म यसरी चर्चित हुन्छु र समाजमा गनिने मानिने व्यक्तिमा पर्छु भन्ने मलाई लागेकै थिएन । मैले कुनै योजना बनाएर अघि बढेको हैन, संयोग हो भन्छु । सायद भाग्य भनेको यही होला जस्तो पनि लाग्छ । एक विदेशी संगीतकर्मीले नेपालमा आएर मेरो स्वर सुनेपछि उहाँको गीतारसँग एउटा एल्बम निकालेपछि त्यो संसारभरी फैलियो । नेपालमा चिनिनुभन्दा धेरै अगाडि म यूरोप, अमेरिका तिर चिनिन थालेको थिएँ ।
तपाई त कलाकारको रुपमा विभिन्न देशहरु घुमिसक्नु भएको छ । कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल र विदेशमा फरक छ ?
— ‘नजिकको तीर्थ हेंला र परको देउता मेला’ भन्ने सोच नेपालीहरुमा पक्कै छ । भारतकै कलाकार नेपाल आउने हो भने हजारौं तिरेर दर्शकहरु कार्यक्रम हेर्न तयार हुन्छन् । तर नेपालका कलाकारको प्रतिभालाई त्यो महत्व दिएको पाईंदैन । विदेशतिर आयोजकहरुले पनि निकै राम्रो सत्कार गर्छन् तर नेपालको आयोजकहरुमा मैले यी कलाकारलाई गाउन दिएँ है भन्ने जस्तो सोचाइ भएको पनि पाउँछु । यद्यपि मलाई नै त्यस्तो भएको चाहिं होइन । साथीहरुले यस्ता कुराहरु सुनाउनुहुन्छ, दुःख लाग्छ ।
तपाईंको स्वर मिठो छ, गीतहरु चर्चित छन्, संगीतकै शिक्षा कति लिनुभएको छ ?
— मैले त्यो सौभाग्य चाहिं अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन । शायद मैले पूर्व जन्ममा पक्कै कुनै न कुनै तपस्या गरेको हुनुपर्छ जसले गर्दा अहिले म गाउन सकिरहेको छु जस्तो लाग्छ । संगीत साधनाबाट आएको होइन मेरो आवाज ।
हिजोआजको दैनिकी बताईदिनुस् न ।
— बेलुका छिटो सुत्ने, बिहान चाँडै उठ्छु र ध्यानमा बस्छु । शारीरिक व्यायम र योगा पनि गर्छु । जुम्बा पनि गर्ने कोशिस गरिरहेको छु । त्यसपछि भेटघाट, लेखपढ यस्तै यस्तै कामहरु हुन्छ ।
खाना पकाउन कतिको रुचि लाग्छ ?
— त्यो चाहिं मलाई पटक्कै मन लाग्दैन । किनभने सानो उमेरमा मैले त्यो काम धेरै गरें । विहान ५ बजे उठेर ब्रेकफास्ट बनाउनेदेखि लिएर खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने सबै काम गरें । घरको सबै काम यति गरें कि शायद त्यसैले अहिले त्यसबाट दिक्क छु ।
तपाईलाई मनपर्ने खानेकुरा के हो ?
— लाई भोक लागेको जे खान पाए पनि पुुग्छ । तैपनि दाल, भात र तरकारी खान मनपर्छ ।
तपाईले एउटा पुस्तक त प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ । अर्को पुस्तक प्रकाशित गर्ने कुनै योजना छ कि छैन ?
— यो कुरा धेरै आईरहेको छ । तर मैले यो गर्छु भन्ने उत्सुकता नै मेरो जीवनमा कम भइसकेको छ । काम धेरै भयो कम कसरी गरौं भन्ने सोचाईमा छु ।
केही व्यक्तिगत कुरा सोध्न चाहन्छु, तपाईंलाई विवाह गर्ने सोच कहिल्यै आएन ?
— सानैदेखि मैले मेरी आमाको वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण देखेको हुनाले विवाहदेखि सधैं डर लाग्यो । विवाहबाट तर्सिएँ । भाग्यमा दुखै पाउन लेखेको छ भने अर्कै कुरा नत्र विवाह चाहिं गर्न नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्थें, वैवाहिक जीवनप्रति सकारात्मक सोच आउनै नपाई दुःख देखेर होला, आएन ।
कति वर्षको उमेरमा कसरी आनी बन्नु भयो ?
— १० वर्षको उमेरमा आनी बन्छु भन्ने निधो गरेकी थिएँ तर १३ बर्षको उमेरमा बनें । मेरो आमाले आनी बन्ने बाटो देखाउनु भएको हो । उहाँले मलाई मैले विवाह गर्न नचाहेमा आनी बन्न सक्ने बताउनु भयो र मैले त्यही बाटो पछ्याउँदै गएँ ।
तपाईले जीवनमा कहिले कुनै मोडमा यातना भोग्नु प¥यो कि ?
— हाम्रो समाजमा कतै त कतै यातना त भोग्नु पर्छ नै । पुरुषले महिलालाई हेर्ने नकरात्कम दृष्टीकोण र महिलालाई कुनै पुरुषले आफूभन्दा कमजोर सोच्नु नै महिलाप्रतिको यातना होे ।
धेरैजसो कलाकार विदेशिन्छन्, तपाईँको सोच चाहिं के छ ?
— कार्यक्रमको सिलसिलामा विदेश जाने आउने त हुन्छ तर नेपाल छोडेरै जाने मानसिकता भने अहिलेसम्म बनेको छैन ।
अबको यहाँको सोच के छ ?
— अबको मेरो सोच भनेको साधनामा गएर हराउने छ ।